Go’aan uu soo saarey maamulka Gobolka Banaadir oo ku Suubsan Suuqa Weyn ee Bacaadlaha Xamar-weyne
Guddmmoyaha G/Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho,marka uu arkey baahida weyn ee loo qabo in si degdeg ah loo howlgeliyo suuqa weyn ee Bacaadlaha Xamar weyne.
Marka uu arkey tala soo jeedinta ku xigeenka Guddoomiyaha gobolka Bnaadir,ahna duqa magaalada Muqdisho.
Marka uu arkey wadahadalka iyo talo soo jeedinta midowgga ganacsatada G/Banadir,marka uu arkey tixigeliyey;Baahida suuqa bacaadllaha ay u qabaan inuu shaqeeyo shacabka Gobolka Banaaadir.
Sidaas darteeed,laga billaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 7August 2007,waxaa si rasmi ah loo billaabey boosaska suuqa Bacaadllaha Xamarweyne,iyadoo ganacsatada halkaas degeysa laga raba shuruudaha hoos ku qoran.
1-In foomka lacag bixinta laga soo qaato xafiiska midowgga ganacsatada Gobolka Banaadir,iyadoo masuuliyadda suuqaas si madax banaan loogu wareejiyey Midowgga G/G/Bnaadir.
2-Inuu Muwaaddinka Foomkaas hela uu bixinaayo lacag furaha ah oo dhan $2000,oo muwaaddinku uu xaq u yeelanaayo inuu furaha helo,inuu ku ganacsan karo ebedkiisa,kireysanna kara,iibsanna kara asagoo u madax banaan nidaamka sharciga ee suuuqa u desgsan.
3-In Bakhtiyaanasiib lagu kala helaayo qolalka sida ay u kala fiican yihiin.
4-Inuu Bixiyo Muwaaddinku kirada qolka dabaqa hoose $35 bishiiba,dabaqa dhaxe $25 bishiiba,dabaqa sare $15 bishiiba,lacagtaasna ay tahay horumarin loona bixin doono saddex saddex Bilood ugu yaraan.
5-Iyadoo dayactirka bacaadlaha guud ahaan qarashaka ku baxaya uu bixinaayo maamulka G/Banadir.
Digreetadan ayaa waxaa ku saxiixan Guddoomiyaha G/Banaadir ahana duqa magaalada Muqdisho
Maxamed Cumar Maxamuud (Maxad Dheere).